နှုတျခမျးက ပွောနတေဲ့ သငျ့ကနျြးမာရေး အခွအေနေ
HomeKnowledgeနှုတျခမျးက ပွောနတေဲ့ သငျ့ကနျြးမာရေး အခွအေနေ
H June 30, 2021
နှုတျခမျးမှာ နာဗျကွောလေးတှေ အမြားကွီးရှိပွီး လကျဖြားလေးတှထေကျပိုပွီး နုပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ နှုတျခမျးတှကေို အထူး ဂရုစိုကျပေးဖို့ လိုပါတယျ။ တဈခါတလကေရြငျ နှုတျခမျးက ကိုယျ့ရဲ့ကနျြးမာရေးအခွအေနတှေကေိုလညျး ပွောပွနိုငျပါတယျ။
1. နှုတျခမျးအစှနျးတှမှော ကှဲခွငျး
နှုတျခမျးရဲ့အစှနျးထောငျ့တှမှော တံတှေးတှစေုလာတဲ့အခါ တံတှေးက နှုတျခမျးအသားအရပေို ခွောကျပွီးကှဲစပေါတယျ။ နှုတျခမျးရဲ့အစှနျးတှမှော တံတှေးတှေ မစုမိအောငျ မကွာခဏ သုတျပေးသငျ့ပါတယျ။ နှုတျခမျးအစှနျးတှမှော စိုစှတျလာတဲ့အခါ အနာတှေ မကွာခဏ ဖွဈလာတတျပါတယျ။ အဲဒီအခါ သငျ့တျောတဲ့ ဆေးကုသမှု ခံယူသငျ့ပါတယျ။
နှုတျခမျးတှေ ခွောကျပွီးကှဲခွငျးပ ခန်ဓါကိုယျထဲမှာ ရဓေါတျ လိုအပျနကွေောငျး ဖျောပွတာပါ။ ရာသီဥတုအေးတဲ့အခါ၊ စိတျဖိစီးမှုတှမြေားတဲ့အခါမှာလညျး နှုတျခမျးကှဲတတျပါတယျ။အဲဒီအခါ ရမြေားမြားသောကျပွီး ရဓေါတျဖွညျ့တဲ့ ခရငျမျတှကေို လိမျးပေးသငျ့ပါတယျ။ ဓါတျမတညျ့မှုတှေ ဖွဈတဲ့အခါမှာလညျး နှုတျခမျးတှေ ကှဲပါတယျ။
3. နှုတျခမျးပျေါမှာ အဖုပေါကျခွငျး
နှုတျခမျးပျေါမှာ အဖုပေါကျတာက နရေခကျပွီး အတျောကို နာကငျြပါတယျ။ Hyaluronic acid ထိုးပွီးနောကျမှာလညျး နှုတျခမျးပျေါမှာ အဖုပေါကျပါတယျ။
4. နှုတျခမျးတဈဝိုကျမှာ အနီကှငျးမြား ဖွဈလာခွငျး
နှုတျခမျးရောငျအနျးနာကငျြတဲ့အခါ နှုတျခမျးတဈဝိုကျမှာ အနီကှငျးတှေ ဖွဈလာတတျပါတယျ။ နှုတျခမျးအရပွေားက သဘာဝအဆီတှကေ ခနျးခွောကျသှားပွီး နှုတျခမျးတဈဝိုကျမှာ နီပွီး ယားယံတတျပါတယျ။ အဓိကကတော့ ရဓေါတျဖွညျ့ဖို့ လိုတာပါ။
5. နှုတျခမျးအပျေါမှာ အရေးအကွောငျးမြား ဖွဈပျေါလာခွငျး
နှုတျခမျးအပျေါဘကျမှာ အရေးအကွောငျးတှကေို စပွီးသတိထားမိပွီဆိုရငျ ခန်ဓါကိုယျရော စိတျရော အားကုနျနလေို့ပါ။ စိတျဖိစီးမှုမြားတဲ့သူတှကေ ဆေးလိပျတှေ အလှနျသောကျတဲ့အခါ နှုတျခမျးအပျေါဘကျမှာ အရေးအကွောငျးတှေ ပျေါလာပါတယျ။
နှုတျခမျးပွာလာခွငျးက သှေးထဲက အောကျဆီဂငျြလညျပတျမှု အားနညျးလို့ပါ။ ခွဖြေားနဲ့ လကျဖြားတှမှောလညျး ပွာလာတတျပါတယျ။ သှေးအားနညျးရောဂါဖွဈတဲ့အခါမှာ နှုတျလမျးက ဖွူဖြော့လာပါတယျ။ သှေးထဲမှာ သကွားဓါတျနညျးလာတဲ့အခါ၊ သှေးလညျပတျမှုမှာ ပွဿနာရှိတဲ့အခါ၊ ဗီတာမငျခြို့တဲ့တဲ့အခါ နှုတျခမျးဖွူလာတတျပါတယျ။
ဓါတျမတညျ့တဲ့အခါမှာလညျး နှုတျခမျးရောငျတတျပါတယျ။ အလှကုနျပစ်စညျးတှကေို သုံးတဲ့အခါတိုငျးမှာ နှုတျခမျးရောငျ လာတတျလားဆိုတာ သတိပွုသငျ့ပါတယျ။ အခြိနျခဏလေးအတှငျးမှာ နှုတျခမျးက ကွီးသထကျကွီးလာရငျတော့ ဆရာဝနျဆီ အမွနျသာ သှားလိုကျပါ။
8. နှုတျခမျးပျေါမှာ အမညျးစကျမြား ဖွဈပျေါလာခွငျး
ဒီအခွအေနကေိုတော့ မပေါ့ဆသငျ့ပါဘူး။ ခန်ဓါကိုယျထဲမှာ ရောငျခွညျပစ်စညျးတှေ မြားလာတဲ့အခါ နှုတျခမျးပျေါမှာသာမက ပါး၊ နှာခေါငျးနဲ့ နဖူးပျေါမှာပါ အမညျးစကျတှေ ဖွဈလာတတျပါတယျ။ နလေောငျဒဏျ မြားခွငျးကွောငျ့လညျး နှုတျခမျးပျေါမှာ အမညျးစကျတှေ ဖွဈလာတတျပါတယျ။
ကငျဆာရဲ့ အကွိုလက်ခဏာလို့ ယူဆမိရငျ ဆရာဝနျဆီ မွနျမွနျသှားသငျ့ပါတယျ။ စားလိုကျတဲ့ အစားအစာတှထေဲကနေ သံဓါတျတှကေို ခန်ဓါကိုယျက အလှနျစုပျယူတဲ့အခါမှာလညျး နှုတျခမျးပျေါမှာ အမညျးစကျတှေ ဖွဈလာတတျပါတယျ။
နှုတ်ခမ်းက ပြောနေတဲ့ သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေ
နှုတ်ခမ်းမှာ နာဗ်ကြောလေးတွေ အများကြီးရှိပြီး လက်ဖျားလေးတွေထက်ပိုပြီး နုပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် နှုတ်ခမ်းတွေကို အထူး ဂရုစိုက်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ တစ်ခါတလေကျရင် နှုတ်ခမ်းက ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကိုလည်း ပြောပြနိုင်ပါတယ်။
1. နှုတ်ခမ်းအစွန်းတွေမှာ ကွဲခြင်း
နှုတ်ခမ်းရဲ့အစွန်းထောင့်တွေမှာ တံတွေးတွေစုလာတဲ့အခါ တံတွေးက နှုတ်ခမ်းအသားအရေပို ခြောက်ပြီးကွဲစေပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းရဲ့အစွန်းတွေမှာ တံတွေးတွေမစုမိအောင် မကြာခဏ သုတ်ပေးသင့်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းအစွန်းတွေမှာ စိုစွတ်လာတဲ့အခါ အနာတွေ မကြာခဏ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ သင့်တော်တဲ့ ဆေးကုသမှု ခံယူသင့်ပါတယ်။
နှုတ်ခမ်းတွေ ခြောက်ပြီးကွဲခြင်းပ ခန္ဓါကိုယ်ထဲမှာ ရေဓါတ် လိုအပ်နေကြောင်း ဖော်ပြတာပါ။ ရာသီဥတုအေးတဲ့အခါ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေများတဲ့အခါမှာလည်း နှုတ်ခမ်းကွဲတတ်ပါတယ်။အဲဒီအခါ ရေများများသောက်ပြီး ရေဓါတ်ဖြည့်တဲ့ ခရင်မ်တွေကို လိမ်းပေးသင့်ပါတယ်။ ဓါတ်မတည့်မှုတွေ ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်း နှုတ်ခမ်းတွေ ကွဲပါတယ်။
3. နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ အဖုပေါက်ခြင်း
နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ အဖုပေါက်တာက နေရခက်ပြီး အတော်ကို နာကျင်ပါတယ်။ Hyaluronic acid ထိုးပြီးနောက်မှာလည်း နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ အဖုပေါက်ပါတယ်။
4. နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက်မှာ အနီကွင်းများ ဖြစ်လာခြင်း
နှုတ်ခမ်းရောင်အန်းနာကျင်တဲ့အခါ နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက်မှာ အနီကွင်းတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းအရေပြားက သဘာဝအဆီတွေက ခန်းခြောက်သွားပြီး နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက်မှာ နီပြီး ယားယံတတ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ရေဓါတ်ဖြည့်ဖို့ လိုတာပါ။
5. နှုတ်ခမ်းအပေါ်မှာ အရေးအကြောင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
နှုတ်ခမ်းအပေါ်ဘက်မှာ အရေးအကြောင်းတွေကို စပြီးသတိထားမိပြီဆိုရင် ခန္ဓါကိုယ်ရော စိတ်ရော အားကုန်နေလို့ပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့သူတွေက ဆေးလိပ်တွေ အလွန်သောက်တဲ့အခါ နှုတ်ခမ်းအပေါ်ဘက်မှာ အရေးအကြောင်းတွေ ပေါ်လာပါတယ်။
နှုတ်ခမ်းပြာလာခြင်းက သွေးထဲက အောက်ဆီဂျင်လည်ပတ်မှု အားနည်းလို့ပါ။ ခြေဖျားနဲ့ လက်ဖျားတွေမှာလည်း ပြာလာတတ်ပါတယ်။ သွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်တဲ့အခါမှာ နှုတ်လမ်းက ဖြူဖျော့လာပါတယ်။ သွေးထဲမှာ သကြားဓါတ်နည်းလာတဲ့အခါ၊ သွေးလည်ပတ်မှုမှာ ပြဿနာရှိတဲ့အခါ၊ ဗီတာမင်ချို့တဲ့တဲ့အခါ နှုတ်ခမ်းဖြူလာတတ်ပါတယ်။
ဓါတ်မတည့်တဲ့အခါမှာလည်း နှုတ်ခမ်းရောင်တတ်ပါတယ်။ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကို သုံးတဲ့အခါတိုင်းမှာ နှုတ်ခမ်းရောင် လာတတ်လားဆိုတာ သတိပြုသင့်ပါတယ်။ အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာ နှုတ်ခမ်းက ကြီးသထက်ကြီးလာရင်တော့ ဆရာဝန်ဆီ အမြန်သာ သွားလိုက်ပါ။
8. နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ အမည်းစက်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
ဒီအခြေအနေကိုတော့ မပေါ့ဆသင့်ပါဘူး။ ခန္ဓါကိုယ်ထဲမှာ ရောင်ခြည်ပစ္စည်းတွေ များလာတဲ့အခါ နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာသာမက ပါး၊ နှာခေါင်းနဲ့ နဖူးပေါ်မှာပါ အမည်းစက်တွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ နေလောင်ဒဏ် များခြင်းကြောင့်လည်း နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ အမည်းစက်တွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
ကင်ဆာရဲ့အကြိုလက္ခဏာလို့ ယူဆမိရင် ဆရာဝန်ဆီ မြန်မြန်သွားသင့်ပါတယ်။ စားလိုက်တဲ့ အစားအစာတွေထဲကနေ သံဓါတ်တွေကို ခန္ဓါကိုယ်က အလွန်စုပ်ယူတဲ့အခါမှာလည်း နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ အမည်းစက်တွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။